प्रत्येक मन्त्रालयलाई अनलाइनबाट नियाल्दै प्रधानमन्त्री, चित्तबुझ्दो काम नगर्नेमाथि तत्काल एक्सन ! Bizshala -
प्रत्येक मन्त्रालयलाई अनलाइनबाट नियाल्दै प्रधानमन्त्री, चित्तबुझ्दो काम नगर्नेमाथि तत्काल एक्सन !
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न मन्त्रालयको कामको प्रगति विवरण अनलाइनमार्फत अनुगमन गरिरहनु भएको छ ।
सरकारले विकास र पूर्वाधारका काम दु्रत गतिमा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई तोकिएका काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफैँ निर्देशन दिनुभएको छ । ‘‘यसअघि वर्षायाम र चाडपर्व परेकाले विकास र पूर्वाधारका काम हुन सकेका थिएनन्’’, प्रवक्ता कुँवरले भन्नुभयो, ‘‘अब वर्षायाम र चाडपर्व सकिएकाले यस आर्थिक वर्षमा सम्पादन गर्नुपर्ने विकास निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारका काम दु्रत गतिमा हुन्छ ।’’